डेभिड फुलरः जसले १०० जनाको शवसँग यौन सम्पर्क गरे ! « Drishti News – Nepalese News Portal
डेभिड फुलरः जसले १०० जनाको शवसँग यौन सम्पर्क गरे !
२२ कार्तिक २०७८, सोमबार 12:59 pm
काठमाडौं । बेलायतका एक व्यक्तिले १०० जनाको शवसँग यौन सम्पर्क गरेको खुलासा भएको छ । २ महिलाको हत्या गरेको आरोपमा १० वर्षअघि पक्राउ परेका डेभिड फुलरले आफूले काम गर्ने अस्पतालका मुर्दाघरका शवसँग घृणित कार्य गरेको स्वीकारेको उल्लेख छ ।
फुलरले सन् १९८७ मा वेन्डी नेल र र क्यारोलिन पियर्स नाम गरेका २ महिलाको हत्या गरेका थिए । उनी सन् २०११ को सेप्टेम्बरमा पक्राउ परेका थिए ।
फुलरले सन् १९८९ देखि २००० सम्म केन्ट एन्ड ससेक्स अस्पताल र टर्नब्रिज वेल्स हस्पिटलका मुर्दाघरमा ल्याइएका महिलाका शवसँग यौन सम्पर्क गरेका थिए । उनले ११ बर्षीय किशोरीदेखि ८० वर्षीया बृद्धको शवसँग घृणित कार्य गरेका थिए ।
यो घटना अनुसन्धानका लागि बेलायत प्रहरीलाई २५ लाख युरो खर्च लागेको छ । ६७ वर्षीय फुलरलाई अदालतले आजिवन काराबासको सजाय सुनाएको छ । एजेन्सी